Fanomezana ara-panahy - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2016-02 mpandimby ny Magazine > Fanomezana ara-panahy
Azontsika tsara ireto teboka tena ilaina ireto avy amin'ny Baiboly mifandray amin'ny fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra ny zanany:
Ny kristiana tsirairay dia manana fanomezam-pahasoavana iray farafahakeliny; amin'ny ankapobeny na telo na telo.
Ny olon-drehetra dia tokony hitondra ny fanomezana ho enti-miasa amin'ny hafa.
Tsy misy olona manana ny fanomezam-pahasoavana rehetra, koa mila mifanampy isika.
Andriamanitra dia manapa-kevitra izay mandray fanomezana.
Takatsika hatrany fa misy ny fanomezam-pahasoavana ara-panahy. Saingy vao haingana dia nanjary nahafantatra bebe kokoa momba azy ireo isika. Fantatsika fa saika ny mambra rehetra dia maniry ny handray anjara amin’ny fanompoana ara-panahy (“Fanompoana ara-panahy” dia manondro ny fanompoana rehetra fa tsy ny asan’ny pastôraly fotsiny.) Ny kristiana tsirairay dia tokony hitondra ny fanomezam-pahasoavana ananany hanompoana ny tombontsoan’ny rehetra (1 Kor.2,7, 1.Petr 4,10). Fitahiana lehibe ho an'ny tsirairay sy ny fiaraha-monina izany fahatsapana ny fanomezam-pahasoavana izany. Ny zavatra tsara dia azo araraotina koa, ary noho izany dia nisy olana vitsivitsy mifandray amin'ny fanomezam-pahasoavana ara-panahy. Mazava ho azy fa tsy ho an’ny fiangonana manokana akory ireo olana ireo, ka mahasoa ny mahita ny fomba niatrehan’ireo mpitondra kristiana hafa ireo olana ireo.
Ilay fandavana tsy hanompo
Ohatra, misy olona mampiasa ny teny hoe fanomezana ara-panahy ho fialan-tsiny tsy hanompoana ny hafa. Milaza, ohatra, izy ireo fa mitarika ny fanomezam-pahasoavana ananany ka noho izany dia mandà tsy hanao fanompoana hafa momba ny fitiavana izy ireo. Na milaza ho mpampianatra izy ireo ka tsy mety manompo amin’ny fomba hafa. Mino aho fa mifanohitra tanteraka amin’izay tian’i Paoly holazaina izany. Nohazavainy fa Andriamanitra dia manome fanomezana ho an’ny olona ho amin’ny fanompoana, fa tsy amin’ny fandavana tsy hanompo. Indraindray ny asa dia mila atao, na misy olona manana fanomezam-pahasoavana manokana na tsia. Tsy maintsy voaomana sy diovina ny efitrano fivoriana. Ny fangoraham-po dia tokony homena amin'ny loza, na manana fanomezam-pahasoavan'ny fangorahana isika na tsia. Ny mpikambana rehetra dia tokony ho afaka mampianatra ny filazantsara (1. Petrus 3,15), na manana ny fanomezam-pahasoavan’ny fitoriana ny filazantsara izy ireo na tsia; tsy mitombina ny fiheverana fa ny mambra rehetra dia tsy maintsy manompo fotsiny izay nomena azy manokana ara-panahy. Tsy ny karazana fanompoana hafa ihany no mila atao, fa ny mpikambana rehetra dia tokony hiaina karazana fanompoana hafa koa. Ny tolotra isan-karazany dia matetika mihantsy antsika ivelan'ny faritra mampionona antsika - ny faritra izay ahatsapantsika fa manan-talenta. Mety ho tian’Andriamanitra hampivelatra fanomezam-pahasoavana izay mbola tsy fantatsika akory aza isika!
Ny ankamaroan'ny olona dia omena fanomezana lehibe iray ka hatramin'ny telo. Noho izany, tsara kokoa ny faritry ny serivisy ho an'ny olona ho an'ny iray na maromaro amin'ireo faritra fanomezana lehibe. Saingy ny olona rehetra dia tokony ho faly manompo any amin'ny faritra hafa satria mila izany ny Fiangonana. Misy fiangonana lehibe miasa araka izao teny filamatra manaraka izao: ”. Ny politika toy izany dia manampy ny mpikambana hitombo ary ny serivisy ho an'ny fiarahamonina dia atokana mandritra ny fotoana voafetra. Ireo serivisy tsy mety ireo dia mifindra amin'ny mpikambana hafa. Ny pasitera za-draharaha sasany dia manombana fa ny mpiangona dia manome 60% fotsiny amin'ny asa fanompoany eo amin'ny sehatry ny fanomezam-pahasoavana lehibe ananany.
Ny zava-dehibe indrindra dia ny fandraisan'ny tsirairay anjara amin'ny fomba sasany. Andraikitra ny serivisy ary tsy olana amin'ny "fanekeko fotsiny izany raha tiako".
Fantaro ny fanomezanao manokana
Eritrereto izao ny fomba hahafantarana hoe inona avy ny fanomezana ara-panahy ananantsika. Misy fomba maromaro hanaovana izany:
Fanadinana fanomezana, fandalinana ary famoronana
Fandinihan-tena momba ny zavatra mahaliana sy traikefa
Ny fanamafisana avy amin'ny olona mahalala anao tsara
Ireo fomba fiasa telo ireo dia samy manampy. Tena manampy raha miatrika valiny mitovy izy rehetra ireo. Saingy tsy misy tsy misy lavorary ny telo amin'izy ireo.
Ny sasany amin'ireo inventories an-tsoratra dia fomba fandinihan-tena fotsiny izay manampy haneho izay eritreritry ny hafa momba anao. Ny fanontaniana mety hapetraka dia: Inona no tianao hatao? Inona no tena fahaizanao? Inona no lazain'ny olon-kafa fa mandeha tsara ianao? Inona no ilaina hitanao ao am-piangonana? (Ny fanontaniana farany dia mifototra amin'ny fandinihana, izay mazàna fantatry ny olona manokana hoe aiza no azon'izy ireo ampiana. Ohatra, ny olona iray manana fanomezana mangoraka dia hieritreritra fa mila fangorahana bebe kokoa ny fiangonana.)
Matetika isika dia tsy mahalala ny fanomezam-pahasoavanay mandra-pahavitanay azy ary mahita fa mahay amin'ny karazana asa manokana isika. Tsy hoe mitombo fotsiny ny fanomezana amin'ny alàlan'ny traikefa, fa azo jerena ihany koa amin'ny alàlan'ny traikefa. Noho izany, dia mahasoa raha manandrana karazana serivisy samihafa ny Kristiana indraindray. Afaka mianatra zavatra momba ny tenanao ianao ary manampy ny hafa.